Cusbooneysiinta xirida 'Coronavirus covid-19': Markaad toostid oo aad ogaato inaad ku jirtid, maxaad sameyn kartaa? : Martin Vrijland
Markuu sannadka 2020 bilaabay waxaan dareemay inay noqonayso sanad adag. Markaad aragto dariiqii ugu dambeeyay ee xiridda coronavirus covid-19 oo xirxiran ayaa hadda rajo xoogaa leh ku dhammaan doonta. Sannadka cusub, waxaan qoray: “Sida aan ka welwelsan ahay, 2020 waxay noqon doontaa sanadka kufsiga iyo is-beddelka guud ee isbadalada. Isbedelada aan waligeen taariikhda ku arag. Waqtigii wuu dhammaaday taliyayaashii dunidan. Kaliya waxay haystaan ​​25 sano ilaa kalidii beenta aheyd. ”
Buuggayga dhammaadka 2019, waxaan saadaaliyay in weli ay weli jirto musiibo oo aan muujinayo in aan goob joog u nahay nidaam fayras oo dhameystiran. Bilowgii Febraayo 24, waxaan qoray maqaal tilmaamaya inay ahayd waqtigii la is tuuri lahaa. Taasi waxay ahayd usbuucyo ka hor xitaa xitaa waxay u muuqdeen inay xaalad degdeg ah Nederland ka jirto. Sawirka ay warbaahintu ka qortay (malaha) IMBers kuwa waraaqda musqusha galaya, waxay ila tahay, fekerkeyga, xariif barnaamij xariif ah oo warbaahinta looga dhaadhicinayo waxa ay tahay inaad iibsato: cunada cimriga dheer, cuntada qasacadaysan, biyo, iyo wixii la mid ah. Nasiib wanaag, akhristayaasha waxay halkan joogeen wakhti badan ka hor intaanan argagaxu dhicin.
Rajada ah “kibirka” waa la nadiifin doonaa
Saadaalin badan oo dheeri ah oo sax ah ayaa soo raacday usbuucyadii la soo dhaafay waxaanan arkay waxa tillaabooyinku qaadi doonaan Taasi waa sababta badanaa la i weydiisto: "Maxaan sameeyaa hadda?", "Sidee ayaan ula tacaalaa dhammaan tallaabooyinka?"
Warbaahinta bulshada waxaan hadda ku aragnaa fiidiyowyo ah sida Janet Ossebaard wareeg. Waxay muujineysaa Donald Trump inuu yahay badbaadiyaha bini aadamka, daawadayaasha waxaa loogu yeeray inay u hogaansamaan wax kasta oo ku dhaca iyaga. Fiidiyowyadeeda fiidiyowga waxay isku dayaan inay dadka ka dhaadhiciyaan in nala ciyaarayo, laakiin waxaan si muuqata u aragnaa doorka laba jibbaar ee mucaaradka la xakameeyay halkan. Janet Ossebaard waxay isku dayeysaa inay dadka ku riixdo shabakadda amniga Q-Anon. Waxay kaloo sheegtey in Donald Trump uu ku mashquulsan yahay 'cabaliyo in coronavirus kaalin ku leeyahay tan.
Waxyaabaha dadku aysan fahmin ayaa ah in warbaahin kale oo badan la sameeyay si loogu ciyaaro labanlaab. Waxay ku siinayaan rajo ah badbaadinta shisheeyaha ama dhicitaanka taleefanka (oo uu Trump yahay badbaadiyaha). Waa inaan ka caawiyo dadkaas riyada: Xaraashku ma dhici doono.
Daawadayaasha fiidiyowyadeeda waxaa loo geliyaa qaab aan caadi aheyn. Waxaan ku idhi:
Waxaa kugu riixaya qaab aan caadi aheyn dadka fadhi gadaal kaameeraha gadaal ka dhigaya oo dareemaya inay iyagu kuu diyaarinayaan. Waa mala-awaal in Q-Anon yahay naadiga qarsoodiga ah ee dadka ku xeeran Trump ee doonaya inuu hantida ka qaado 1%. Iyagu uma imanayaan inay ku badbaadiyaan! Nasiib darro. Khasaare. Taasi waa rajo been ah.
Trump waa cabal. Trump si la mid ah sida adag ayuu u fuliyaa tillaabooyinka xirida. Sawirka la soo qaaday oo sheegaya in tobanaan kun oo Difaaca 2020 askari ay diyaar u yihiin inay nadiifiyaan 'cabal' Yurub waa rajo been ah.
Janet Ossebaard wuxuu kuugu baaqayaa inaad deganaato gudaha markii askartan ay bilaabaan nadiifinta qalinleyda. Soo hel sawirka?
Dib u dejin dhaqaale
Janet Ossebaard waxa kale oo ay sheegaysaa in jiri doono dib u dejin dhaqaale oo ay taajiriinta taajirku la taahay 1% ay dib ugu soo noqon doonaan dadka. "Badbaadiyaha weyn ee Trump ayaa waliba taas kuu diyaarin doona." Maya, maya. Waxa uu qaban doono (sida hogaamiyayaasha Yurub) waxay ku siin doonaan dakhli aasaasi ah waxayna u badan tahay in la aruuriyo tiro badan, bangiyada iyo lacagaha howlgabnimada ayaa qaran lagu geyn doonaa. Ma taqaan waxa loo yaqaan? Wadaag.
Waxaan u dhaqaaqnaa nidaam hanti wadaag ah. Tareenka degdega ah. Taas ayaan si faahfaahsan u sharaxay maqaalkani.
Marka run ahaantii waxaan arkaynaa dib u dejin dhaqaale, laakiin nooc kale oo aan ahayn Q-Anon iyo Janet Ossebaard ayaa kuu sheegaya. Waxaan ka oran lahaa halkan goobta sanado badan in dib u dejinta noocan ahi ay tahay inay timaado (eeg halkan). Fayraska corona hadda waa caadi albi. In dad badani ay u ciyaaraan si uun ama si kale waa wax macquul ah, laakiin sheekada Janet Ossebaard waxaa ka buuxa dabinno been abuur ah oo ula kac ah (sida halkan sharaxay)
Nidaamka shuuciga ah ee Janet Ossebaard iyo kuwa kale oo badan ayaa hadda sharaf weyn leh, halka ugu yeeraya inaad fadhiisiga aamusnaan ku fadhiisatid, runti hoos u dhac ayaa ku yimid. Waxay noqon doontaa mid isugeyn wadaaga farsamo wadareed ahaato talis.
Waxaa la filayaa in laga yaabo inay jiraan siyaasiyiin dhowr ah oo garoonka ka bixi doona. Tani badanaa waa sababta oo ah waa wax faa'iido leh in lagu beddelo pawns-kii bilaabay hawlahan wadaagga ah 'pawns' cusub 'gacmo jaban'. Yaanay noqon been abuur fikirka iyo faafinta warbaahinta kale ee qaar ka mid ah Agaasimayaasha caanka ah ee is casilay. Taasi waa qayb ka mid ah shabaqa badbaadada ee Q-Anon.
Nidaamka wadaaga kombuyuutareed tikniyoolaji ahaan waxaay la micno tahay inaad heli doonto hubaal aasaasi ah (daqli, guri, iwm.), Laakiin waxaa kugu kormeeri doona teknolojiyad.
Dhaqdhaqaaq kasta oo aad sameysid waxaa kormeeraya nidaamyada xogta weyn. Faafida coronavirus waxay xaqiijineysaa in qaabab farsamo oo dheeraad ah si dhaqso leh loo hirgalin karo. Waa inaad ka fekertaa mid Aqoonsiga dijitaalka ah ee aan lagu tashan karin, kaas oo, tusaale ahaan, diiwaan geliso fayrasyada aad qabtid; haddii aad bogsatay; Dawooyinka aad qaadatay iyo tallaalka aad qaadatay iyo caafimaadkaaga ayaa laga yaabaa in si toos ah looga ilaaliyo daruuraha. Markaa waxaad qayb ka tahay 5G internetka ee waxyaabaha.
Markaa hadaad toostid oo aad aragto warbaahinta kale ee iskudayaya inay kugu ilaaliso qaab jaceyl ah oo ay ka kooban yihiin nus rukuno isku dhafan beenta isla markaana gacan ka geysata inaad la qabsato shuuciyada rajo beenta, ma ogtahay inaysan kuu tilmaameynin farsamada Khatarta in ay jirto. Waxay rabaan inaad dhex fadhiisato oo ay u ogolaato in ciidanka iyo booliisku wax uun sameeyaan. Ka dib oo dhan, waxay u yimaadaan inay nadiifiyaan xargaha. Maya, ugu badnaan warbaahintu waxay ka warbixin doontaa isbeddel weyn oo ka dhaca The Hague ama Brussels; ugu badnaanna kuuma muujinayaan naxdinta dhabta ah. Ciyaarta chess-kaan waxay tixgalineysaa waxaad ka fileysay, si aad usii waddo raacitaanka sheekada.
Markaa hadaad runti rabto inaad hurdada ka kacdo, waa inaad kubarataa been abuur sida sheekooyinka Q-Anon iyo Donald Trump. Haddaad runti rabto inaad toosiyo, waa inaad aragtaa waxa socda oo aad ogaato in nidaam samafal uu soo ifbaxayo. Nidaamkaas wadareedka ahi hadda ma sii socon doono. Mar labaad. Xoriyadaha laguu oggol yahay inaad ku raaxaysato waxay soo noqonaysaa oo keliya haddii lagu siiyo 'sumadda'. Taasi ma xasuusineysaa sheegid kitaabiga ah? Haa, taasi waa wax lagu xasuusto sheegid kitaabiga ah:
Iyo inaanu ninna iibsan karin ama iibin karin qof leh calaamadda, Magaca bahalka ama nambarkiisa magiciisa ”(Muujintii 13: 16-17)
Buuggayga waxaan ku sharraxayaa inaan ku jirno waqtiga dhamaadka nebiyadu. In kasta oo dad badani doorbidaan in ay iska indhatiraan diinta maalmahan, iyo in kasta oo aanan diinteyda ahay, waxaan aqoonsanahay in hoggaamiyeyaasha adduunka ay raacaan ujeeddooyinka diineed. Sabab maahan in Trump uu ku dhawaaqay Qudus inay tahay caasimada Israa’iil, mana ahan wax aan aheyn inay rabaan dib u dhiska macbudka Sulaymaan. Buuggayga waxaan ku sharraxayaa sida ay hoggaamiyayaashu adduunka u raacaan 'aaladda' qoraalka ''. Qoraalkaas sayidkiisa ayaa hadda si cad oo deg deg ah indhahayaga hoos ugu soo dhacaya.
oo aad garwaaqsan tahay in lagu xidho
Waxaan si dhakhso ah u ogaan doonnaa in si buuxda aan isku xirnay. Waxaan ka shaki qabaa inay muddo dheer qaadan doonto. Dadku waa inay aad u cabsi qabaan oo ay aqbali doonaan tallaabooyinka qallafsan. Qaar badan ayaa awoodi doona inay daawadaan dadka laga soo qaadayo daaqadaha gadaashiisa ama balakoonka. Waxaa laga qaadaa maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay cudurka qabaan ama sababtoo ah "ma dhagaysan tilmaamaha". Iyo sababta oo ah qof walba wuxuu ku jiraa guryahooda, qofna ma caawiyo.
Saxaafaddu waxay sii wadi doontaa inay noo sheegto inaad aragto qalliin caafimaad oo wanaagsan oo qalliin oo lama huraan ah weligiisna qofna ma ogaan doono inta dad ah ee dambiilayaasha ah ay u baaba'aan. Thanks to Janet Ossebaard inaad si deggan u sugto; si kalsooni leh "in Trump nadiifiyo kabaliska".
Waxaan u badan nahay inaan wali ku heli doonno wareegyo dadka jidadka tagaya daal iyo gaajo darteed 'sidaa darteed ha dhegaysan tilmaamaha'. Difaaca 2020 ayaa laga yaabaa inuu diyaar u yahay taas (ma nadiifiyo "cabal").
Markaa, bilo ama laga yaabee sannad kadib, rajo yar oo ka soo kabashada ayaa lagu sharxi doonaa siyaasada.
Rajada ah in warbaahinta iyo siyaasada ay aakhirka soo bandhigaan waxay noqon doonaan marka hore in uu jiro daawo ka hortagaysa fayraska ka dibna tallaal la bixin doono. Waxaana la qiyaasi karaa in tan lagu dari doono soo bandhigida nidaam dijital ah (sida kor lagu soo sheegay), halkaas oo had iyo jeer ay ka caddahay qof walba halka uu joogo ama dawada uu helay ama ay ka mid tahay la socodka waqtiga-dhabta ah Caafimaadka (oo ay ku jiraan CRISPR-CAS12) akhri oo qor waxqabadka).
Markaa waad safri kartaa mar labaad. Soone ilaa aag iyo mar dambe ma lahan dhammaan xuduudaha furan, laakiin jaranjarooyinka xuduuda aaggu waxay noqon doonaan kuwo aad u balaaran oo tiro ahaan iyo tiro ahaan ah. Waxaan ku kala duwan nahay dadka loo oggol yahay inay soo galaan aagagga qaarkood iyo kuwa kale ee aan loo oggolayn inay galaan. Waxaan u dhaqaaqnaa dhanka teknolojiyada guud ee farsamo ahaan "badbaadada".
maxaad qaban kartaa
Maxaan markaa samayn karnaa? Ma inaan iska caabinno ilig iyo ciddiyaha? Waxaan aaminsanahay inay jirto xuquuq aasaasi ah oo aadane oo aan waligeed lagu xadgudbin, taasina waa xornimo. Hadda tani waa la jabiyey tan iyo xilligii xuska oo jir ahaan uma adkaysan karto booliis. Xaqiiqdii, nooc kasta oo caabbi ayaa si arxan darro ah loo cabiri doonaa. Xitaa haddii aad ka dhahdo warbaahinta bulshada ama qolkaaga jiifka (halka Siri uu dhageysanayo) inaad u aragto inay yihiin dhammaan tallaabooyin nacasnimo ah, waxaad ku jiri kartaa xaalad samafal ah.
Qof kasta oo walxaha halista ku jira waa laga yaabaa waana laga yaabaa in la iska tuuro. Waxaas oo dhami waxay ku dhici doonaan daminta "xakamaynta cudurka 'coronavirus', sababta oo ah dadka aan raacin tilmaamaha ama xitaa laga yaabo inay u soo jeediyaan kuwa kale inaysan raacin tilmaamaha ayaa khatar ku ah bulshada.
Runtii miyaanan haynin talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan waxaad samayn karto. Haa, laakiin taasi waxay ku saabsan tahay isbeddelka miyir-qabka iyo aragtida gabi ahaanba ka duwan aragtida guud ee ay hadda warbaahinta iyo warbaahinta kale kaa joojinayaan. Taasi waxay ku saabsan tahay firfircoonaanta qofka aad runtii tahay. Taasi waxay ku saabsan tahay dhaqaajinta hal abuurka xoogga hal abuurka iyo asalkaaga. Codkaas ayaa sabeyn kara, laakiin maahan. Si fudud ayaan kuu sharxaa
Adigoo arkaaya qoraalka 'Master' iyo sameynta saadaasha saxda ah, waxaa iska cada inay tani tahay tillaabo muhiim u ah isbedelka dhabta ah. Waxaan had iyo jeer sheegay in 1 maqaal ay aad ugu gaaban tahay tan. Taasi waa sababta aan in badan u shaqeeyey buug cad oo la aqrin karo. Marka waa inaad marka hore aqrisaa, runtiina waa muhiim hadda! Ka dibna waxaad ka aqrisan kartaa wax ku darista buuggaas, halkan websaydhka.
Waxaan nahay xayawaan aad u awood badan hadana waa waqtigii aan ka bixi laheyn qaab shuruud la’aan ah. Aad baad uga weyn tahay waxaad ogaatay! Waqtiga lagu ogaanayo.
Lasoco qodobkaan: halkan ka akhriso
Liiska kuxiran: valcabal.nl
Tags: Anon, cabal, coronavirus, Covid-19, Donald, IMBers, Janet, xirid, Caano-gadhka, faafa, Q, Trump, dillaac
Alie Muana ayaa qoray:
24 Maarso 2020 at 12: 59
Bilaash ayaad heshay, lacag la’aan ayaad ku siin doontaa…
Maxaad ugu siidayn weyday xalkaaga si xor ah?
Waxaan helay dareen ah in la ii gacan-galiyay iibsashada buuggaaga si aan u helo xalkaaga.
Uma maleynayo in taasi la jaan qaadayso muujinta aad soo bandhigtay.
Mise aniga khalad baan ka qabaa taas?
24 Maarso 2020 at 13: 18
Haddii aad u tagto dukaanka buugagta ee loogu talagalay Kitaabka Quduuska ah, ma bilaash baad ku helaysaa?
Hadaad u tagto rootida rootida kibis yar miyaad helaysaa bilaash?
Hadaad daawato TV, miyaanad lahayn rukumad mushahar ah?
oo waxaad tidhaahdaan "Waxba wixii aad soo qaaddeen, waxba waxba kama bixin doontaan ..."
Waxba kuma aan sameynin wax aan in kabadan 7 sano ah, laakiin ma weydiin karo daabacaha inuu buuggeyga bilaash ku daabaco.
Buuggu wuxuu soo koobayaa dhammaan 7daas sano wax kastoo buugga ku jirana waa lacag la’aan lagu akhriyi karaa bilaash waxaa laga helay goobta. Markaa waa inaad raadiso oo guji maqaal illaa maqaal. Si kastaba ha noqotee, buuggu wuxuu siinayaa soo koobid aad u kooban oo sidaas darteed la sameeyey; Codsiga akhristayaasha badan.
Taageeradaada iyo qadarintiina waa la mahadinayaa. Dabcan muhiim maahan. Waa la oggol yahay.
Esmeevd ayaa qoray:
24 Maarso 2020 at 22: 20
Kaliya waxaan iibsaday buuggaaga! Aan i dhiirrigeliyo sano. Waxa kaliya ee wali dareemaya wanaag iyo kalsoonida macluumaadka waa adiga!
Kaliya maaha dad intaas ka badan oo aan maqlay.
Su’aashaydu waxay u aqrinaysaa sidan soo socota.
Mudo intee leeg ayay noo xidhi karaan? Ma waxaa loola jeedaa carruurta iwm oo aan muddo dheer qaadan karin? Marka laga reebo taas iyo dhammaan wacyiga aad leedahay! Miyaadan ka baqeyn inay kugu soo kaxeeyaan ama kaa dhigayaan inaad ku baabba'do meel kasta oo laga yaabo (mararka qaarkood la yaab meesha) waxay ka dhigan tahay in wax walba dabcan lagu akhriyi karo internetka. Mase heli kartaa illaa iyo inta la arki karo cidda iibsatay buugga? In ay iyagu horay usameynayaan tallaabadaas oo ay kugu soo qaadayaan. Dabcan waan aqri doonaa si taxaddar leh buuggaaga. Jeclaada oo is ogow.
Hooyo daneyneysa xilligan, laakiin ogaanshaha inaan aad iyo aad uga awood badanahay sida aan u maleyno! Laakiin sidee su’aashu wali tahay ..
24 Maarso 2020 at 14: 06
Jawaabtaada Martin ma fiicna. Ii daa
halkaa ku hay.
24 Maarso 2020 at 14: 08
Badanaa waligood lama daabicin magacyo (hada waad garanaysaa sida taasi u shaqayso ... trolls, profile been abuur, bots ... laakiin gaar ahaan IMB'ers-ka) yaa ka jawaaba markay muhiim tahay in warbaahinta bulshada ay ahaato gebi ahaanba aasaaska fikradaha gobolka.
24 Maarso 2020 at 13: 16
Runtii tani waa ajandaha tuhmanayaasha caadiga ah, u hogaansanaanta ma ogola ogola!
24 Maarso 2020 at 19: 01
Greta Thunberg waxay ku raaxeysataa ku ciyaarista banaanka caruurta kale
sida muuqata aan gebi ahaanba lagu hayn meel masaafad u jirta mitirka nus half
Mise hurdo ayey ku seexday Nederland habeenki guga oo qabow qabow leh -6 darajo Celsius guga?
24 Maarso 2020 at 19: 45
Marka waa la saadaalin karaa….
24 Maarso 2020 at 20: 17
Haa waxay bilaabeysaa inay noqoto mid naxariis badan (haddii aysan ahayn waxay rabeen).
24 Maarso 2020 at 20: 16
Waxaan bartay in qoto dheer ee aad u dhex gasho godka bakaylaha iyo marka aad maamusho si aad u hesho ilaha saxda ah (Waxaan u malaynayaa in degelkani yahay isha ugu wanaagsan ee Nederland) way sii fududaanaysaa si ay u xajistaan ​​(goobo kale oo la xakameeyo) (macluumaad kale oo sharci ah oo sharci ah ).
Fekerkaagu marwalba wuu fiicnaanayaa. (Waxaan sidoo kale u maleynayay dhawr sano ka hor in Baudet iyo tusaale nigel farage runtii wey ka duwanaayeen). Sikastaba, waxaan aaminsanahay 100% oo buuxa
99% ama in kabadan oo ka mid ah goobaha kale ayaa ah mucaaradka
100% dhammaan siyaasiyiinta adduunka oo dhan waxaa si buuxda u maamula (u shaqeeya) aqoonyahannada. (ma jiro mid aan la hubin).
25 Maarso 2020 at 05: 25
Kite !!! Ugu dambeyntii dakhliga aasaasiga ah (nohee, akhri qodobka Mr Vrijland ee Noofembar 2019)
Dad badan ayaa aad ugu faraxsan in gobolka ay lacag ugu imaan doonaan!
Lacag aan ku tiirsannahay isla dowlad wadaaga.
Lacag aan u baahanahay, oo ah (tuhmanayaasha caadiga ah) wax badan oo aan aad u yarnahay, hadda waa uun zeros iyo kuwa aannaan marin u lahayn.
Laakiin dib ayaanu ugu faraxsanahay lacag mar labaad, Martin hore, maqaal hore ayuu maqaal uga qoray, eygu marmarka qaarkood buro buunbuunina inta soo hadhayna way fiican yihiin, soo qaadaan, Fadhiyaan, Fadhiyaan, Pak, Wanaagsan
Baakadu waa hagaagsan tahay, way fiicantahay
25 Maarso 2020 at 10: 23
Marka America dhexdeeda waxay rabaan inay sameeyaan nooc hordhac ah oo ku saabsan dakhliga aasaasiga ah (qoyskiiba 3000 oo aan aqaano). Tani waxay u badan tahay inay dhaliso waxa loogu yeero dakhliga aasaasiga ah ee ku meelgaarka ah (kumeelgaarka waa wargeys joogto ah) gudaha Mareykanka.
Waxay umuuqataa in dakhligan asaasiga ah lagu bixin doono kaliya lacag qaali ah (nooc FED bitcoin ah) ugu yaraan waan maqlay. Marka waa in dadka oo dhami ay bartaan lacagta cusub ee loo yaqaan 'One World Electronic lacagta'.
Dabcan tani waa laga duubay adduunka oo dhan.
Waxay u muuqataa in dadka ku nool Mareykanka iyo Aasiya (laakiin waxaan maqlay tan la sheegay) inay hadda ku sii wareegayaan 5G super si dhaqso ah (iyada oo aan dib loo riixin maxaa yeelay dadweynaha ayaa hadda sameynaya waxyaabo kale). Waxaan u maleynayaa in tani sidoo kale ay ka dhici doonto adduunka intiisa kale.
Afrika, halkaasoo dalal badan ay wali ku jiraan 3G, Ma aqaan sida loo sameeyo tan.
Xitaa waxaa jira hadallo ku saabsan tikniyoolajiyadda 6G, ma aqaan nooca argagaxa keeni doono. Teknolojiyadda cusub ayaa dhakhso u socota si ay arrimuhu u socdaan halka kii hore aan xitaa la soo bandhigin.
25 Maarso 2020 at 10: 52
Elon Musk wuxuu leeyahay labo gantaal oo qurux badan oo la sheegay inay bilaabi doonaan daraasiin 5G satellites ah cirka oo loogu talagaly adduunka oo dhan.
Waxaan la yaabanahay sida ay tani u tahay farsamo ahaan, maxaa yeelay 5G celcelis ahaan waxay ubaahan tahay masaafo yar, laakiin tani waa waxaad ka helaysaa warbaahinta.
26 Maarso 2020 at 06: 54
Laga bilaabo Maarso 19, 2020, COVID-19 looma arko in uu yahay cawaaqib aad u sarreeya oo cudurada faafa (HCID) gudaha Boqortooyada Midowday.
.. marka laga reebo Madurodam 🙂
26 Maarso 2020 at 07: 10
Taasi waa sababta oo ah Trump, Bolsonaro iyo Johnson dhammaantood waxay leeyihiin hal sumad: sumadda dhanka midig
Iyo sidii aan marar badan ugu qoray maqaallo badan, dadka sida Robert Jensen, Alex Jones iyo kuwa la mid ah ee afafka midigta laga taabto waa inay ahaadaan shabaq badbaado oo weyn. Waa inay kasbadaan taageerayaal badan oo dhaleeceeya warbaahinta guud iyo siyaasada guud. Waa inay gacan ka geystaan ​​dhismaha astaantaas oo ay si cad ugu xidhaan falsafad gaar ah astaantaas. Sidoo kale waa inay si cad ugu xiraan astaanta astaanta xerada Trump (Trump, Bolsonaro, Johnson).
Markaas astaanta (si cad loo shaaciyey) astaanta ayaa loo wada ururinayaa. Wadada hada loo xushay ayaa ah wadada “Waxay iska dhigayaan inaanu sidaa ugu xun masiibada cudurka coronavirus”. Summadaha dhinaca midigta ku xidhan ayaa sidaas awgeed lala xidhiidhiyaa 'diidaha coronavirus' diidiyeyaasha dhibaatada '.
Markaas arrinta ayaa gabi ahaanba la xiray. Markaa Trump iyo Bolsonaro iyo Johnson (dhamaadka Brexit) waa inay ka baxaan garoonka isla markaana garabka bidix ee garabka bidix mar labaad la wareegaan oo kuwa dhaleeceeya xabsiga loo taxaabo; qofna waa inuusan waligiis shaki gelin warbaahinta guud.
Natiijada: wadaaga shuuciga wadajirka ah ee loo yaqaan “state badbaadada” oo ay kujiraan booliska fikirka.
29 Maarso 2020 at 13: 34
Mahadsanid Martin fikradahaaga. Waxaan u iibsaday buuggaaga sidii PDF ah sababta oo ah ma aanan ogeyn in wadarta xannibaadda ay imaan doonto, laakiin illaa hadda ma jiraan, waxaan "smart" dadka Dutch-ka wax uga qaban karnaa "xannibaadda caqliga leh". Waa inaan dhahaa hal mar ayaan shaqada ka tagay sababtoo ah waxaan u maleynayaa inay cadaalad darro aheyn inaad ku tilmaamtay nooc kasta oo dadka inay yihiin horjoogsi la xakameynayay, laakiin waxaan hadda arkay inaad ka saxsanyd sidii aan moodayay waqtigaas. Tan iyo Charlie H Waxaan u hibeeyay bakayle kasta - erey aan doorbido inaanan mar dambe isticmaalin sababta oo ah hadda waxaan ogahay inay tahay tusaale u ah 'pedophile sodomi' - oo runtiina in badan oo dhimashadoodu waxay u rogmatay si loogu talagalay. Waan la yaabay sida ugu fudud ee dadyowga adduunka oo dhan sida adhiga oo kale, waxaa hagaya cabsi laga qabo xirxiridda iyo jahawareerka bulshada. Maaddaama luuqaddu ay tahay qaab hingaadis, labadaas erey waxay leeyihiin awood ka ballaadhan sidii aad u malayn lahayd aragtida koowaad. Hal-ku-dhegga leh masaafada jireed laakiin bulshada u dhow wax ayaa yeelan lahayd saamayn gabi ahaanba ka duwan. Qufulista, dabcan, waxaa loola jeedaa xiritaanka naftayada ama unugyada asliga ah ee loo yaqaan 'stem cell stem' sida aad ugu yeerayso.
Bill Wesick of occultscience101, kuma sii jiro YT laakiin liisaska liistada, oo hadda onocs101ark.com wuxuu ku habboon yahay qeexidda luqadda lambarrada ee Saturnal Luciferian in cudurka uu ku dhacay fayraska dhabta ah. Ma arki doontid ilaa aad ka xaqiijiso. Nasiib darrose, 99% inaga mid ahi ma aragno.
Waxaan qabaa calool xanuun markaan ka fekero waxa binu aadamku sugayo, laakiin intii karaankeyga ah iga ilaali xiriirinta asalka ilaha asalka ah. Ma hayo wax kale oo badan oo aan sameeyo ...
« Fadlan la soco: Dukumentiga Covid-19 Janet Ossebaard (Ninefornews) waa been abuur wararka been abuur ah
Trump, Q-Anon iyo 'nadiifinta fikirka' qoto dheer '(Robert Jensen, Janet Ossebaard) »
Guud ahaan Wadarta: 1.519.835
Maxay dad badan oo hareerahaaga ah ugu muuqdaan indhoole?
Fayrasku wuxuu isku dayaa inuu ku faafo jirka oo dhan oo uu xado macluumaadka unugyada asliga ah
David Icke London Fiidiyowga dhabta ah ee faaf-reebka ah: miyaa Icke mid dhab ah mise mid been ah mise runta ayaa lagu qariyey dabin booby?
Lydia Roosje op Shirka jaraa'id Mark Rutte iyo Hugo de Jonge: bulshada hal mitir iyo bar iyo hordhaca barnaamijyada
falanqeeyaan op Maxay dad badan oo hareerahaaga ah ugu muuqdaan indhoole?
SalmonInClick op Maxay dad badan oo hareerahaaga ah ugu muuqdaan indhoole?
Martin Vrijland op Shirka jaraa'id Mark Rutte iyo Hugo de Jonge: bulshada hal mitir iyo bar iyo hordhaca barnaamijyada
Martin Vrijland op Maxay dad badan oo hareerahaaga ah ugu muuqdaan indhoole?